Ny LG G Flex 2 izao dia ofisialy | Androidsis
LG G Flex 2: LG dia mampiseho an'izao tontolo izao ny bibidia vaovao miaraka amin'ny efijery miolaka
Alfonso ny voankazo | | LG
Raha tsiambaratelo misokatra izany LG dia hanolotra ao amin'ny CES 2015 ny mpandimby ny LG G Flex, lasa ofisialy ihany tamin'ny farany: ny LG G Flex Eto ny 2, terminal iray izay manao kalitao avo lenta raha oharina amin'ny teo alohany.
Ny teboka voalohany tsy tokony ho adino dia ny LG G Flex 2 dia kely kokoa ary tsy dia mavesatra noho ny teo alohany. Miaraka amina endrika mifintina kokoa, tsipika manintona mitovy toetra ara-teknika izay manandratra azy amin'ny avo indrindra amin'ny sehatra, ny smartphone vaovao miolakolaka vaovao avy amin'ny mpamokatra Koreana dia nandeha matanjaka.
1 Volavola mamaky tany
2 Sarimihetsika 5.5-inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD
3 Terminal iray tena matanjaka
4 Fakan-tsary matanjaka
5 Daty sy famoahana ny daty
7 Tombontsoa sy lafy tsaran'ny terminal
Volavola mamaky tany
Inona no azoko hambara aminao fa ny endriny, miaraka amin'ny toetrany miolikolika, ny LG G Flex 2 dia maneho ny kalitao sy ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny masony rehetra. Asongadino ny endriny eo anoloana mihena, avela ny efijery dia mitana ny 74,39% amin'ny faritra anoloana eo amin'ny fitaovana.
Nitaraina ny mpampiasa ny amin'ny haben'ny haben'ny LG Flex ary toa nihaino azy ireo ny ekipa mpamolavola ny goavambe Aziatika. Amin'izany fomba izany no LG G Flex 2 dia manana refy mitovy amin'ny an'ny LG G3, ankoatry ny lanja mitovy. Amin'izany no ahitantsika terminal izay mirefy 149,1 mm ny haavony, 75,3 mm ny lavany ary 9,4 mn ny sakany, ary 152 grama ny lanjany.
Ny antsipiriany tena miavaka ao amin'ny G Flex dia izany fanoherana ny hatairana sy tohitra. Ny soson'ilay loko metaly manamboatra tena dia namela fa rehefa nanjary akaiky kokoa ny loharano namoaka hafanana ilay faritra simba dia hamboarina ao anatin'ny minitra vitsy. Ny LG G Flex 2 dia mampiasa ity haitao ity indray, saingy nahenan'izy ireo latsaky ny 10 segondra ny fotoana fanamboarana.
Sarimihetsika 5.5-inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD
Amin'ny habe voafintina kokoa, ny LG G Flex 2 dia antenaina hanana efijery kely kokoa. Amin'ity tranga ity dia nametaka tontonana ireo tovolahy avy amin'ny LG P- 5.5-inch Full HD OLED izay mahatratra ny vahaolana 1920 x 1080 teboka.
Nisedra olana iray i LG: tsy afaka nampiditra tontonana Gorilla Glass 3 izy io noho ny fihodinan'ilay fitaovana. Ny vahaolana? Ny fividianana vokatra vita Corning ary manome azy fitsaboana simika miafina mba hahatonga ny tontolon'ny sidina LG a 20% matanjaka kokoa noho ny Gorilla Glass 3, ary malefaka amboniny.
Terminal iray tena matanjaka
Ny LG G Flex dia biby mampifangaro a Qualcomm snapdragon 810 octa-core processeur miaraka amina maritrano 64-bit sy ny hafainganan'ny famantaranandro 2.0 GHz. Hisy kinova roa, ny iray manana tahiry anatiny 16 GB sy 2 GB RAM ary maodely hafa misy memoara 32 GB sy 3 GB. Mazava ho azy, ny slot ny carte microSD dia ahafahanao manitatra ny fahatsiarovana hatramin'ny 2 TB. Saika tsy misy.
Asongadino ny Bateria 3.000 mAh, mihoatra ny ampy hanohanana ny fitaovana matanjaka an'ity bibikely miolaka ity. Marihina fa hanana rafitra famerana haingana izy io, ahafahantsika manana ny antsasaky ny terminal mijanona ao anatin'ny 40 minitra.
Raha ny fifandraisana, ny G Flex 2 dia miarakan Fanohanana LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi a / b / g / n / ac, ary NFC. Araka ny efa nampoizina, ny Android 5.0 L dia hiandraikitra ny famolavolana ity smartphone ity miaraka amin'ny efijery miolaka.
LG dia nampiasa an'io singa io ihany izay nampiditra ny G3 tao amin'ny LG G Flex 2. Amin'izany no ahitantsika a Fakantsary lehibe 13 megapixel miaraka amin'ny flash LES roa, autofocus tamin'ny laser ary ny Stabilization Image Optical Plus (OIS +). Ny fakantsariny eo aloha dia misy solomaso selfie 2.1 megapixel.
Amin'ity karazana hetsika ity dia tsy matetika no omena io karazana data io, na dia azontsika atao aza ny mieritreritra fa ny LG G Flex hamely ny tsena amin'ny tapaky ny volana martsa ho avy izao. Mikasika ny vidiny, eto aho manombatombana, fa rehefa dinihina ny LG G Flex dia navotsotra tamin'ny vidiny 799 euro, azontsika atao ny manantena ny handimby azy mitovy na mety hahatratra 899 Euros aza izy noho ireo tombontsoa ampidiriny ...
Tombontsoa sy lafy tsaran'ny terminal
Famolavolana tena manintona
Sarony aoriana manasitrana tena
Ahoana ny hevitrao momba ny LG G Flex 2? Fiovana sahaza ny teo alohany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG G Flex 2: LG dia mampiseho an'izao tontolo izao ny bibidia vaovao miaraka amin'ny efijery miolaka
Nydia terreforte dia hoy izy:
Wow dia biby ity, LG izao dia nanome tehina,
Valiny tamin'i Nydia Terreforte
Biby iray ... Pf lg no nitondra azy nivoaka ny valan-javaboary ... Nampiaiky volana ...
HTC Desire 320, terminal farany ambany izay hisongadina amin'ny vidiny novaina
Ny Xiaomi Redmi 2 dia natolotra miaraka amin'ny chip Snapdragon 410 64-bit ho an'ny $ 119